Baahin: Isniin, May 30, Weriye Maxmed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Wasiirka warfaafinta ee Puntland oo tafaasiil ka bixiyey dagaal ka dhacay Tukaraq, ku eedeeyey Somaliland weeraro gardarro ah … Puntland oo ku eedaysay dawlada federaalku in ay lug ku leedahay dagaalka ka soo cusboonaaday gobolka Sool … Ururka suxufiyiinta Somaliyeed ee NUSUJ oo doortay hoggaan cusub; Burhaan Axmed Daahir, guddoomiyaha cusub ayaan waraysanay … 2,500 oo barakacayaal ah oo laga raray boosaskii ay degaanaayeen ee magaalada Bossaso; Duqa magaalada Bossaso ayaan waraysanay … Gudd. gobolka Gedo oo ka xog warramay dagaalada ka socda gobolka, sheegay in ay dhawaan la wareegi doonaan gobolka … – Radio Daljir
Baahin: Isniin, May 30, Weriye Maxmed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Wasiirka warfaafinta ee Puntland oo tafaasiil ka bixiyey dagaal ka dhacay Tukaraq, ku eedeeyey Somaliland weeraro gardarro ah … Puntland oo ku eedaysay dawlada federaalku in ay lug ku leedahay dagaalka ka soo cusboonaaday gobolka Sool … Ururka suxufiyiinta Somaliyeed ee NUSUJ oo doortay hoggaan cusub; Burhaan Axmed Daahir, guddoomiyaha cusub ayaan waraysanay … 2,500 oo barakacayaal ah oo laga raray boosaskii ay degaanaayeen ee magaalada Bossaso; Duqa magaalada Bossaso ayaan waraysanay … Gudd. gobolka Gedo oo ka xog warramay dagaalada ka socda gobolka, sheegay in ay dhawaan la wareegi doonaan gobolka …
Maajo 30, 2011 12:00 b 0
?Dad Somali ah ayaa ku dhintay dagaalka maanta, qaarna waa la la?yahay? Qunsulka safaaradda Somalida ee Cadan.
War saxaafadeed: Dawladda Puntland oo beenisay warbixin ay qortay Financial Times ee lacag madax-furasho ah oo lagu qabay madaarka Muqdisho.